20 Kheyraad Bilaash ah oo loogu talagalay Maalinta Jacaylka | Abuurista khadka tooska ah
Maalinta Jacaylka waa maalin ku habboon suuqgeynta iyo nashqadeynta alaabada iyo curinta xiisaha leh. Racfaan ayaa loo sameeyay jacaylka dabeecadiisa aasaasiga ah waxaana loogu talagalay in lagu salaaxo shanta dareen ee daawadayaasha si loo kiciyo adeegso iyadoo caadifad loo qaadanaayo marmarsiinyo. Midabada diiran, dheddigga iyo jilicsanaanta waxay ku yeeshaan caan. Waxay ku saabsan tahay muujinta astaamaha sida dareenka, isku soo dhawaanshaha iyo danqashada.
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loogu dhowaado halabuurkeena waxayna ku xirnaan doontaa nooca ganacsiga, macmiilka iyo dhexdhexaadka taas oo abuurnimadeena la soo bandhigi doono. Waxaa jira noocyo qurux badan oo aan u adeegsan karno horumarinta fikradaha ugu xiisaha badan. Laga soo bilaabo taabashada carruurnimada iyo mid aan waxba galabsan illaa mid ka sii nixin, xadgudub iyo rabshad leh. Intaas waxaa sii dheer, shaqadeennu waxay u janjeeri karaan kuwo intaa ka sii badan minimalist iyo guri (si aad ah ayaa lagula taliyay haddii aan u shaqeyno halabuurro leh taageero digital) ama liddi ku ah wax badan qorshe yar, xitaa baroque taasina waxay ku tusaysaa farriinteenna qaddarin aad u tiro badan iyo nuance.
Si aan kuugu dhiirrigeliyo oo aan kuu siiyo ilo wax ku ool ah oo soo jiidasho leh, maanta waxaan kuu dhaafayaa waxyaabo tayo sare leh oo gebi ahaanba bilaash ah oo laga soo saaray Freepik. Dhexdooda waxaan ka helnaa kaararka, xaashiyaha, qoraallada, astaamaha iyo walxaha vectorized. Haddii aad wax dhibaato ah ku qabtid xiriiriyeyaasha, waa inaad kaliya ii sheegtaa, xusuusnow inay tahay inaad nuqul ka sameysid baaylka biraawsarkaaga si aad u hesho.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Kaararka kartoonka » 20 ilo bilaash ah oo loogu talagalay Maalinta Jacaylka
+ 100 noocyada xirfadeed ee naqshadeynta websaydhka bilaashka ah (II)
Aruurinta sawir gacmeedyada aan ixtiraamka laheyn ee uu qoray James Franco